Home Wararka Farmajo iyo Kooxdiisa Shabaabeysan oo Ku tashaday inay Kordhiyaan weerrarrada Argagixiso ee...
Farmajo iyo Kooxdiisa Shabaabeysan oo Ku tashaday inay Kordhiyaan weerrarrada Argagixiso ee Gobolka.
Xoga qarsoon oo laga helayo villada ayaa sheegayo inay dowladda NN iyo Shabaab oo iskaashanaya ay wadaan qorshooyin qarsoon oo ay labadaba dan u arkeen:
In weerraro lagu qaado ciidanka AMISOM si loo geliyo khaldaad, iyagana ay isdifaacan oo ay xabadao furaan halkaasna ay dad shacab ah wax ku noqdaan, iyadoo markaas ka dib la abuurayo aragti ah waa cadowga dadka Somaliyeed ee dalka ha laga saaro si Shabab iyo Maleyshiyda Farmajo loogu gacan banneeyo inay Xamar waxay rabaan ka sameeyaan.
In Ugandha laga fuliyo qaraxyo si dowladda iyo Dadka Ugaandha loo nacsiiyo shacbiga Somaliyeed halkaasna uu ka yimaado cawaaqib ah naceyb iyo falal lagula kaco Somalida Ugandha joogta, kadibna dowladda NN ay sheegto Ugandha waa cadow ee ciidankeeda ha naga baxaan.
Ujeedada ariintaa arrimo dhowr ah oo hadda la qorsheynayo kuwaas oo ah in dalka la keensado ciidamao ay dowladda Somaliyeed dalbato kuwaas oo ka iman doona dalka Erateriya. Dhinaca kale waxaa aad loo isticmaali doonaa kooxihii maleyshiyaadka ahaa ee magacyada kala duwan la siiyey loona geliyey labiska ciidamada kana amarqaata Farmajo iyo kuwa ka amarqaata sida Odawa iyo Farxaan Qaroole.
Arrimahan waxaa barbar socda dilal qorsheysan iyo cabsiis Xamar laga wado kuwaas oo habeen walba ka dhaca magaalada Muqdiso iyadoo dilalka qaarka ay saxaafadda ogaato kaliya la shaaciyo, kuwa badan aan la ogaan ama ay ka maqan yihiin reerahooda. Waxaa kale loo fasaxay in dalka la soo geliyo dooroogooyinka iyo khamriga nooc kasta oo ay yihiin.
Dhammaan madaxda iyo kuwa haya masuuuliyado kale hooseeya waxay habeen kasta u tagaan hoteelada Muqdisho ku yaalla oo lagu baab’iyo gabdho iyo wiilal yaryar oo inta daroogo la siiyo wixii la rabo lagu falo, waana qorsho ay wataan Farmajo iyo kooxdiisa si Xamar ay saameyn culus ugu yeeshaan taariikhda muddadii uu Farmajo xukumayey hadhowna la yiraahdo waxaas waxay dhaceen xelligii uu Farmajo xukumayey Xamar.
Filimada sida qarsoon loo soo duubo waxaad ka arkeysaa gabdho yaryar oo la faraxumeynayo ama sidii la rabo laga yeelayo iyadoo wiilal yaryarna lagu kufasado meelahaasa haddii ay hadlaanna loogu hanjbo dil oo dhowr ay sidaas ku maqan yihiin si kuwa kale loo tuso inaan la khaarijin doono.
Dhacdooyinkaan waxaa ka cad :
In Faramajo iyo Shabaabka ay wada shaqeeyaan oo dilalka qorsheysan ay kuwada jiraan siidii Afrika oo ay NISA qeyb ka ahayd oo soo qaaday ninka dilay una keentay Afrika.
In weeraada Aragaxiso ay isla ogyihiin oo ay ka dhacaan oo kaliya meelo ay la fududeeyey.
In dowladda ay waddo baabi’in dhallinyarada dadka Muqdisho deggan si looga reebo gobbolada kale ee dalka oo ay u soo baxaan jiilal ay daroogo dilay oo aan wax shaqo ah lagu aamini Karin hadhow.
In shabaab ay beentood tahay diinta ay ka hadlayaan haddii kale baararkaas iyo hoteeladaas ayey wax ka qaban lahaayeen oo mid ama laba haddey wax ka qabtaan waa laga wada cabsan lahaa laakiin iyagaaba qeyb ka ah oo cashuur ka qaata, daroogadana ama u keena ama u fasaxa.
Haddaba Reer Muqdishow maanta halkaas ayaad mareysaan ee ma waxaad sugeysaan marka ay jawaabaha burburka caruurtiinna soo baxaan oo AMISOM la eryo si takrifal ciidana SNA iyo NISA loo sameeyN karo?, caruurtiinna ay wada noqdaan kuwa ku baaba’a mukhaaraadka hadda loogu tala galay?. Imisa jeer ayaad maqashay Puntland oo Khamri qabatay? Maxaad u maqli weydeen Xamar oo khamri ama daroogo lagu qabtay? Lagauma qabto ee waa loo soo dhoofiyaa waana lagu ilaaliya oo lagu qeybiyaa.